Mamely Indray Ny Avaratra-Atsinanan’i Shina Ny Airpocalypse · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Novambra 2015 2:52 GMT
Iray amin'ireo faritra indostraly voalohany ao Shina i Liaoning. Avy amin'ny fitambaran'ny faritany roa, Liaodong sy Liaoxi, sy fari-piadidiana dimy, mitolona amin'ny fitontonganana ara-toekarena ilay faritra. Tena vao haingana i Liaoning no niatrika ihany koa ilay antsoina hoe “airpocalypse” avy amin'ny fahalotoan'ny rivotra.
Nanomboka ny 5 Novambra, rakotra setroka mampidi-doza ireo tanàndehibe maro ao Liaoning, isan'izany ny renivohiny, Shenyang, izay tonga amin'ny fetra farany ambany ny firaketana ny kalitaon'ny rivotra ao an-toerana tamin'ny 8 Novambra, in-130 voatilin'ny Fikambanana Iraisampirenena misahana ny Fahasalamàna (OMS) ho ambanin'ny refy heverina fa tsy mampidi-doza.
Nahitàna PM 2.5 tamin'ny fatra ambony indrindra 1326 μg/m3 ny 8 Novambra teo ny rivotra tao Shenyang. Ny PM2.5 dia singa faran'izay bitika noho ny 2.5 micrometers. Tany amin'ny distrika sasany tao an-tanàna, ny tondro dia nirakitra fatra avo hatramin'ny 1400 μg/m3. Mety mipetraka eny amin'ny rivotra mandritry ny andro maro ireny singa mpandoto ireny, na herinandro maro, ary miditra any amin'ny taovam-pisefoan'ny olombelona, miteraka aretin'ny havokavoka, homamiadan'ny havokavoka, emphysema, na fahafatesana mialoha ny fotoana ho an'ireo olona manana aretin'ny fo na ny havokavoka. Araka ny torolàlan'ny OMS momba ny resaka fahalotoan'ny rivotra, lazaina fa mampidi-doza ny rivotra rehefa hita eo elanelan'ny 301-500 μg/m3 ny fatran'ny PM 2.5 ao anatin'ny rivotra.
Ahiahian'ireo manampahaizana momba ny tontolo iainana ho ampahany amin'ny fiakaran'ny fahalotoan'ny rivotra ny fitomboan'ny habetsahan'ny fandoroana arintany, mololo na zavatra hafa fanafanàna. Vokany, voalohany teo amin'ny tantarany ny birao momba ny tontolo iainana ao Shenyang no nametraka drafitra vonjitaitra ho fiatrehana izany.
Pikantsary: famakiana ny PM2.5 tao Shenyang ny 8 Novambra, avy amin'ny Aqistudy.cn, tranonkala iray fanarahana maso ny kalitaon'ny rivotra.
Takian'ilay drafitra ofisialy hiatrehana ny hamehana noho ny havesatry ny fahalotoan'ny rivotra ny hampitsarahana vonjimaika ireo asa fanorenana eny ivelan'ny trano sy hamerana ny isan'ny fiara mifamoivoy eny an'arabe, saingy mbola hitan'ny mpanao gazety avy amin'ny masoivohom-baovao Xinhua fa mbola misy ihany toerana fanorenana manohy miasa. Tsy najain'ny fifamoivoizana ao an-tanàna ihany koa ilay famerana ny fiara mivezivezy.
Mitombo be mihasorena, maro amin'ny vahoaka sy ireo media no mamerina manontany ny maha-drafitra mahomby ilay nataon'ny tanàna hiatrehana ny hamehana.
Bi Deli, manmpahaizana iray momba ny arintany ratsy kalitao ao amin'ny Akademian'ny Siansa Sosialy ao Liaoning, niteny tamin'ny mediam-panjakàna fa tsy ampy ny fepetra ahafahana mampihatra ny sasany amin'ireo drafitra ofisialy natao hiatrehana ny hamehana :
Nanohy ny fampianarana ny lisea sasantsasany, nanitsakitsaka ihany koa ilay fepetra nataon'ny tanàna hiatrehana ny hamehana. Raha tokony ho nampitsahatra ny fampianarana, ohatra, ny sekoly iray, dia naleony fotsiny niteny tamin'ireo mpianatra mba tsy hanao fampiasàna vatana ivelan'ny trano. Namaly ny hafatry ny mpitantana ny mpianatra iray tao amin'ilay sekoly, nanehoany ny hadisoam-panantenany tao amin'ny Weibo, ilay tolotra fanoratana bilaogy bitika ao Shina :
Nokianin'ny mpianatra iray hafa avy ao amin'ny lisea ny Departamanta miahy ny Tontolo Iainana sy ny Fanabeazana :
Ho an'ny faritra avaratra-atsinanan'i Shina, ny fandoroana arintany no efa fomba fanafanàna nahazatra hatrizay. Tamin'ny ririnina lasa teo, tao Shenyang, efa ho 18 tapitrisa taonina ny arintany narehitra mba hahazoana hafanana ho an'ireo mponina ao an-toerana. Tamin'io vanimpotoana iray io monja no nahavitan'ny tanàna nandàny ny 60% amin'ny fanjifàny arintany ho an'io taona io.
Tany ampiandohan'ity taona ity, nofidian'ny governemantan'i Shenyang ny hiala amin'ny fomba fakàna hafanana amin'ny arintany ka hampiasa ny azo amin'ny herinaratra amin'ny hoavy. Natao io tetikady io mba hampidinana ny fatran'ny fanjifàna arintany 35 kg isaky ny metatra toradroa ho lasa 22kg.
Ao anatin'ilay Dafitra-Dimy Taona faha-13 ao Shina, nanome toky ny governemanta foibe fa hampidina ny fiankinandoha amin'ireo akora fandrehitra azo avy amin'ny zavatra lò ary hampiroborobo ny angovo madio. Efa hitan'i Shina ny fanapahana tahàka izany tany aloha tany, kanefa, toa mbola ho lavitra ny làlana aleha mankany amin'ny revolisionan'ny fanatsaràna kalitao ny rivotra.